Ungazidlulisela kanjani izithombe zisuka ku-iPhone ziye ku-Mac | ngivela ku-mac
Ungazidlulisela kanjani izithombe zisuka ku-iPhone ziye ku-Mac
Ngokukhishwa kwenguqulo entsha ngayinye ye-iOS, njengenguqulo entsha ngayinye ye-macOS, evela ku-Soy de Mac sihlala sikuncoma. yenza ekuqaleni ukufaka, ungabuyekezi ngokuqondile idivayisi kusukela enguqulweni esesivele siyifakile kukhompuyutha yethu.
Yize inqubo ithatha isikhathi futhi idinga ukuthi siphinde sifake izinhlelo zokusebenza futhi, iyindlela engcono kakhulu yokuthi i-iPhone, i-iPad ne-Mac yethu iqhubeke nokusebenza njengosuku lokuqala. Endabeni ye-iPhone, kwenzekani ezithombeni enginazo ku-iPhone? Ngizidlulisela kanjani izithombe zisuka ku-iPhone ziye ku-Mac?
Uma kuyi-Mac, lokho kulungile, njengoba indlela elula yokwenza isipele zonke izithombe injalo xhuma i-hard drive yangaphandle bese ukopisha konke okuqukethwe esizigcine ku-Mac.
Nokho, uma kuyi-iPhone noma i-iPad, izinto zihluke ngokuphelele. Ngisho nangokwengeziwe, uma kuyi-Mac, njengoba, ku-Windows, inqubo ilula kakhulu. Uma ufuna ukwazi ukuthi ungazidlulisela kanjani izithombe zisuka ku-iPhone ziye ku-Mac, ngikumema ukuthi uqhubeke nokufunda.
2 Ngohlelo lokusebenza lwezithombe
4 Okunye okukhethwa kukho
4.1 I-imeyili Drop
Indlela elula, esheshayo futhi eshibhile ukudlulisa izithombe zisuka ku-iPhone ziye ku-Mac wukusebenzisa ubuchwepheshe be-Apple AirDrop. I-AirDrop isivumela ukuthi sidlulise noma yiluphi uhlobo lwefayela phakathi kwamadivayisi we-Apple inqobo nje uma womabili ehambisana.
Lobu buchwepheshe isebenzisa i-Wi-Fi (uma ikhona) ne-bluetooth ukuthumela okuqukethwe, ngakho isivinini sokudlulisa siphezulu kakhulu.
Kunconyiwe thumela okuqukethwe ngamabhlogo ezithombe namavidiyo uma singafuni kokubili i-Mac ne-iPhone ukuthi icabange ngalokho okufanele yenze futhi ekugcineni ingadlulisi lutho.
Nakuba lobu buchwepheshe buneminyaka eminingi bukhona, ekuqaleni bebutholakala kuphela ku-Mac. Ngokuphuma kwe-iPhone 5, I-Apple yethule lesi sici ku-iPhone.
Ukuze usebenzise i-AirDrop ukuthumela izithombe namavidiyo kusuka ku-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu ku-Mac lokhu kufanele iphathwe yi-iOS 8 futhi ibe:
iPhone: iPhone 5 noma kamuva
I-iPad: Isizukulwane sesine se-iPad noma kamuva
I-iPad Pro: Isizukulwane sokuqala se-iPad Pro noma kamuva
I-iPad Mini: Isizukulwane sokuqala se-iPad Mini noma kamuva
I-iPod Touch: Isizukulwane sesi-5 se-iPod Touch noma kamuva
Futhi, i-iMac ezothola okuqukethwe, kumele iphathwe yi-OS X Yosemite 10.10 futhi ibe:
IMacBook Air kusuka maphakathi no-2012 noma kamuva
I-MacBook Pro kusukela maphakathi no-2012 noma kamuva
iMac kusuka maphakathi no-2012 noma kamuva
I-Mac Mini kusukela maphakathi no-2012 noma kamuva
I-Mac Pro kusukela maphakathi no-2013 noma kamuva
Uma idivayisi yakho ingekho phakathi kwe-iPhone, i-iPad, noma i-iPod touch encane noma enye yama-Mac asekelwe, ngeke ukwazi ukusebenzisa lo msebenzi ukudlulisa izithombe zisuka ku-iPhone yakho ziye ku-Mac usebenzisa ubuchwepheshe be-AirDrop.
Ngohlelo lokusebenza lwezithombe
Uma sinenkontileka yesikhala sokulondoloza ku-iCloud Drive, asidingi ukwenza isipele kuzo zonke izithombe esizigcinile ku-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch, njengoba lezi zigcinwe efwini le-Apple. Konke lokho okuqukethwe kufinyeleleka ku-Mac sibonga uhlelo lokusebenza lwezithombe.
Uma ungenaso isikhala esengeziwe se-iCloud esingaphezu kuka-5 GB i-Apple esinika bonke abasebenzisi, ungasebenzisa uhlelo lokusebenza lwezithombe ku-Mac yakho ukuze ngenisa konke okuqukethwe esikugcine ku-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu.
Ngaphambi kokwenza le nqubo, kufanele sikuhlole lokho sinendawo eyanele endaweni yethu yokugcina ukuze senze inqubo.
Ukuze usebenzise uhlelo lokusebenza lwezithombe ku-Mac yakho ukuze hambisa izithombe ze-iPhone, kufanele senze izinyathelo engikubonisa zona ngezansi:
Into yokuqala okufanele siyenze ukuxhuma i-iPhone, iPad noma iPod touch yethu ku-Mac usebenzisa ikhebula lokushaja le-USB.
Okulandelayo, sivula uhlelo lokusebenza Izithombe ku-Mac.
Kuhlelo lokusebenza lwezithombe, kuzovela isikrini esisimema ukuba senze kanjalo ngenisa izithombe namavidiyo esiwagcine ku-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu.
Uma lesi sikrini singavezwa, chofoza kudivayisi esiyixhume ku-Mac ekukholamu engakwesobunxele.
Okulandelayo, ukuqinisekisa ukuthi singama abanikazi abafanelekile be-iPhone, i-iPad, noma i-iPod touch lapho sifuna ukukopisha ulwazi, izosimema ukuthi sifake ikhodi yokuvula yedivayisi yethu ye-iOS.
Uma usibuza ukuthi siyafuna yini themba lelo qembu. Kulo mbuzo, siphendula ngokuchofoza ku-Trust.
Isinyathelo esilandelayo khetha ifolda lapho sifuna ukungenisa khona okuqukethwe kusuka ku-iPhone yethu ngokuchofoza kokwehliswayo okutholakala kwesokudla nje Ukungenisa ukuze:
Uma ufuna ukulondoloza izithombe zakho kusigcinalwazi esihlukile futhi unganciki ohlelweni lokusebenza lwezithombe akufanelekile ukungenisa okuqukethwe kulabhulali yezithombe (inketho ezenzakalelayo) kodwa kuhla lwemibhalo esinalo futhi singakopisha kalula kusigcinalwazi sangaphandle.
Ekugcineni, kufanele sikhethe zonke izithombe namavidiyo esiwafunayo. Uma singakaze senze le nqubo, chofoza Ngenisa zonke izithombe ezintsha.
Ngokuya ngenani eliphelele lesikhala esithathwe izithombe nezithombe esinazo kudivayisi yethu, Le nqubo ingathatha isikhathi esiningi noma esincane.
Uma i-iPhone noma i-Mac yethu isindala futhi uhlelo lokusebenza Lwezithombe alusiniki leso sici, noma awufuni nje ukusebenzisa lolu hlelo lokusebenza, singaphendukela kuhlelo lokusebenza. iFunbox.
I-iFunbox iyasivumela khipha konke okuqukethwe esikugcinile kudivayisi yethu njengokungathi umhloli wefayela. Kufanele nje sixhume i-iPhone, i-iPad noma i-iPod yethu ku-Mac, sivule uhlelo lokusebenza ku-Mac yethu futhi, kukholamu engakwesokunxele, sifinyelele imenyu yekhamera.
Okunye okukhethwa kukho
Izinketho ezi-3 engikubonise ngenhla zilungele dlulisa inani elikhulu lezithombe nezithombe kusuka kudivayisi ye-iOS/iPadOS kuya ku-Mac.
Nokho, uma nje ufuna dlulisa inombolo encane yezithombe futhi awufuni ukusebenzisa noma yiziphi izindlela kulezi ezingenhla, nazi ezinye izinketho ezimbili:
Nakuba singenaso isikhala sokulondoloza esinenkontileka ku-iCloud, i-Apple isivumela ukuthi sidlulisele izithombe namavidiyo kusuka ku-iPhone, iPad noma i-iPod touch siye ku-Mac nanoma iyiphi enye idivayisi. ngokusebenzisa umsebenzi we-Mail Drop.
Lo msebenzi uyasivumela thumela amafayela amakhulu ngohlelo lokusebenza Lwemeyili kudivayisi yethu ye-iOS. Kodwa, esikhundleni sokuzithumela ngokuqondile ngeposi, zilayishwa efwini le-Apple futhi ngokuzenzakalelayo, i-Apple izothumela isixhumanisi sokulanda lokho okuqukethwe.
Wonke amafayela abiwe kusetshenziswa i-MailDrop zitholakala izinsuku ezingama-30. Ukuze sisebenzise lolu hlelo, kufanele sikwenze nge-akhawunti ye-imeyili esiyibhalise njenge-ID ye-Apple.
Enye inketho ekahle yokuthumela izithombe namavidiyo ku-Mac itholakala kusevisi yokuthumela amafayela amakhulu e-WeTransfer. Ngohlelo lokusebenza olutholakalayo lwe-iOS, singathumela imibhalo, izithombe, amavidiyo kanye nanoma yiluphi olunye uhlobo lwefayela ngesilinganiso esiphezulu esingu-2 GB.
Uma sesiluvulile isicelo, Akukho ukubhaliswa okudingekayo, sikhetha okuqukethwe esifuna ukwabelana ngakho, sifaka ikheli le-imeyili lomamukeli bese sithumela okuqukethwe.
Njengenketho ye-Mail Drop, le nketho nayo ihamba kancane kunezinketho engizibonise ngenhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » I-Mac OS X » Ungazidlulisela kanjani izithombe zisuka ku-iPhone ziye ku-Mac
Ushiye "Ukuthwebula Kwesithombe" osekuvele kujwayelekile kuyo yonke i-Mac futhi esebenzela izikena. Lokho okwathi thina esixhuma iselula ku-Mac ukuze sikushaje.
Impendulo ivela ku- Vladimir:
Sawubona, ngisebenzisa lesi sihloko, lapho ngixhuma i-iPhone (i-12 pro max) ku-Imac (M1), ihlala "ilayisha izithombe ezizozingenisa kusuka ..." futhi azilayishi. Ngike ngabona ku-internet okwenzeka kubantu abaningi futhi isixazululo abasinikezayo ukuyibeka endizeni, bahambe, babuyele phakathi, bayibuyisele esimweni esijwayelekile... kwesinye isikhathi iyasebenza, kwesinye isikhathi ayisebenzi. Ukhona owaziyo ukuthi kungani kwenzeka kanye nesixazululo esisebenzayo? Ngiyabonga
"Uma sinenkontileka yesikhala sokugcina ku-iCloud Drive" futhi uma senze Izithombe zasebenza ku-iCloud, ngoba ngaphandle kokubili...
Dlulisa izinkulungwane zezithombe nge-AirDrop, ungazise ukuthi kuhamba kanjani...
Ukusebenzisa Izithombe, into enengqondo yokugwema ukulahlekelwa ikhwalithi kungaba "ukukhipha ngaphandle kokulungisa" noma into enjalo. Kodwa... ikuthumela kuwe ngokususa idethi ezithathwe ngayo bese ibeka into entsha ‍♂️ engingazi ukuthi unjiniyela ucabangeni ukuklama kanjalo (ngokusobala usuku uhlelo lokusebenza lwezithombe ku-Mac oluvumelaniswe ngalo. isithombe - esichazwe okungenani ku-Apple Care-). Ngisho, akubekezeleleki.
Ezinye ze-UK Apple Stores zibonakala zibuyela kwesijwayelekile
I-Apple isusa ukuqinisekiswa kwe-Unidays ekuthengeni kwabafundi